13/06/2018 - Page 5 sur 5 -
Fampianarana Any antsirabe : Niato indray ny adina fanatanjahantena
Mikatona avokoa ny sekolim-panjakana rehetra any Antsirabe, ary miato toraka izany ihany koa ny adina ara-panatanjahantena. Miray hina sy manohana ny tolon’ireo mpampianatra manao fitakiana noho izany ihany koa mantsy ireo mpanadina fanatanjahantena ireto nanomboka …Tohiny
Ahiana ny hisian’ny tsy fanjariantsakafo amin’ny kaomina maro any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy iny noho ny fihenan’ny voka-bary izay ateraky ny tsy fahampian’ny rotsak’orana. Nisongadina izany, nandritra ny fivorian’ny teknisiana avy amin’ny fahasalamana, avy amin’ny …Tohiny
Nitondra fanazavana mahakasika ny fanasoketana azy tany anaty tambazotran-tserasera sy tany anaty gazety mpivoaka isan’andro ary haino aman-jery sasantsasany Maurice Tsiavonana omaly tolakandro teny amin’ny trano fonenany teny Ambatobe. Nanambara ity mpanao gazety ity fa …Tohiny
Vaovao farany! Nametra-pialana tsy ho filohan’ny vondrona parlemantera HVM ny solombavambahoaka John Elite. Isan’ireo depiote nahavita be teny Atsimondrano ny tenany, raha tsy hiresaka afatsy ny lalana mampitohy Ratsimamanga, izay ny tenany sy ny ankohonany …Tohiny
Tsy nitazam-potsiny, ary tsy afaka ny nangina manoloana ny fisavovon’ny fako eto Antananarivo Renivohitra ny mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny tanàna, Marc Ravalomanana. Araka izany, nanao antso avo amin’ireo tompon’andraikitra isan-tokony misahana ny fanalana sy fanesorana ireo ...Tohiny